सबै प्रकारको प्रशंसा सत्य ईश्वर अल्लाहको लागि छ जसले सम्पूर्ण संसारको निर्माण गरे तथा मानव र दानवलाई आफ्नो पूजाको आदेश दिए यसको निम्ति उनले प्रत्येक समुदायमा आफ्नो सन्देशबाहक पठाए । सबै सन्देशबाहकहरुले आ–आफ्नो समुदायमा एक सत्य ईश्वरको पूजापाठ गर्न आदेश दिएका थिए । मुहम्मद (उहामाथि चिर शान्ति होस्) अल्लाहको अन्तिम ईशदूत हुनुहुन्थ्यो । उहाले अल्लाहको सन्देश सम्पूर्ण संसारमा पु¥याई दिनुभयो । यसका साथै सत्य र असत्य मार्ग छुट्याई दिनुभयो । आउनुहोस् एउटा आगोको पूजा गर्ने व्यक्तिको जीवनी पढौं कि उनले सत्य मार्गको खोजीमा कति दुख र कष्ट उठाए र अन्तिममा अल्लाहको दया र कृपाले सत्य मार्ग सम्म पुगे । उनको भनाई छ
Read more: सलमानफारसी (रजि.)
– मुहम्मद इब्राहीम खरेल
यो संसार सृष्टि गर्ने, पालन गर्ने र अन्तमा संहार गर्ने एक परम शक्तिशाली महिमावान ईश्वर हुन् भने पुजा पनि उनको नै हुनुपर्छ । किनकि तपाई सोच्नुहोस् यो सिंगो ब्रह्माण्डलाई हामीले बनाएको मूर्तिले सृष्टि गर्न सक्छ त भनेर मैले तपाईलाई सोधे भने तपाई अवश्य पनि भन्नुहुन्छ,“सक्दैन” । जब मूर्तिमा त्यो क्षमता छैन भने आखिर किन पुजा गर्ने ? यस सम्बन्धमा कुरआनमा भनिएको छ,“हे मानव हो ! एउटा उदाहरण बयान गरिन्छ; यसलाई अलिक ध्यानपूर्वक सुन । अल्लाहलाई छोडी तिमीहरू जसलाई पुकार्छौ तिनीहरूले एउटा झिङ्गासम्म सृष्टि गर्न सक्दैनन् चाहे त्यसकोनिम्ति तिनीहरू सबै एकजुट नै किन नहोऊन् । र, कुनै झिङ्गाले तिनीहरूको कुनै वस्तु खोसेर लगेमा तिनीहरूले त्यसबाट त्यो वस्तु पनि छुटाउन सक्दैनन् । सहायता माग्नेवाला पनि दुर्बल र जोसित सहायता मागिन्छ त्यो पनि दुर्बल !” (कुरआन २२ः७३)
Read more: सातमहापापहरु
रोजा राख्न मक्रुह रहेका दिनहरु
जमहूर (जसमा इमाम शाफिई (रह.) र इमाम अह्मद (रह.) र साधारण मुहद्दिसहरु सामेल छन्) का अनुसार हप्ता भरिमा केवल शुक्रबारको दिन रोजा राख्नु मक्रुह हो तर यदि कोही त्यस (शुक्रबार) भन्दा पहिले पनि वा त्यसपछि पनि रोजा राख्छ वा कोही व्यक्ति आफ्नो बानी अनुसार रोजा राखिरहेको क्रममा शुक्रबार पनि आईपर्यो वा शुक्रवारको दिन अरफा वा आशुरहका रोजा पर्छ भने यी अवस्थाहरुमा शुक्रबारको दिन रोजा राख्नु मक्रुह होइन ।
Read more: रोजा राख्न मक्रुह रहेका दिनहरु
रमजानका रोजाहरुको कजा
रमजान (महिनामा छुटेका रोजाहरुको) कजा तिर्दा लगातार रोजा राख्नु अनिवार्य छैन । बरु रोजाहरु लगातार पनि राख्न सकिन्छ र छुट्टा छुट्टै पनि । पवित्र कुरआनको आयतमा त्यो संख्या अन्य दिनहरुमा” पूरा गर्ने उल्लेख भएको छ । ती दिनहरुलाई लगातार वा छुट्टा छुट्टै गरेर पूरा गर्ने विषयमा केही उल्लेख भएको छैन । यी दुबै अवस्थाहरुको अनुमति रहेको छ ।
Read more: रमजानका रोजाहरुको कजा
रजब महिनाको महत्व र रजब महिनामा गरिने केही बिद्अत कार्यहरु ? रजबको महिनाको महत्व के छ र मानिसहरु अज्ञान्ताको कारण के कस्तो विद्अत काम गर्दछन् भन्ने विषयमा ज्ञान होस् र बिद्अत कार्यबाट बचेर सही इबादत गर्न सकून भन्ने उद्देश्य हो । रजबको महिनाको विषयमा आज हामी तपाईहरु समक्ष एउटा सानो लेख पेश गर्नेछौं जसबाट पाठकहरुलाई केही लाभ पुग्ने आशा गर्दछु । वास्तवमा इस्लाम धर्ममा पाप-अपराध र अन्याय-अत्यचार गर्नबाट जहिले पनि मनाहि गरिएको छ। तर यी प्रतिष्ठितवाला-आदर-सम्मानजनक-महिनाहरुमा पाप-अपराध गर्नु अझ ठूलो पाप हो। यसको आदर-सम्मान गर्नालाई नै यी महिनामा युद्धकालागि पहल गर्नबाट पनि मनाही गरिएको छ। जे जस्तो कारण भएपनि यो स्पष्ट छ कि हज्ज जुल्हिज्जाको महिनामा गरिन्छ। यसर्थ हज्जमा बरु हज्ज भन्दा पहिला र पछि शान्तिको कति आवशयकता हुन्छ ॽयो अवगत नै होला। मानिसहरु संसारको कुना-काँप्चाबाट हज्ज गर्नका लागि मक्का पुगेर शान्तिपूर्ण रुपमा इस्लामको यस स्तम्भलाई इस्लामीसिद्धान्तबमोजिम पूरा गर्न चाहन्छन्। अनि जुल्कअदाको महिना जुल्हिज्जा भन्दा पहिला र मुहर्रम जुल्हिज्जा पछिको महिनालाई भनिन्छ। यसर्थ पनि यिनको आदर-सम्मान गर्नु अत्यन्तै आवशयक छ। यसै प्रकार रजबको महिनाको आदर-सम्मानको आदेश हुनाले त्यसमा पनि पाप-अपराध गर्नलाई ठूलो पाप घोषित गरिएको छ। जस्तै अल्लाहले पवित्र कुरआनमा भन्नुभएको छ :
Read more: रजब महिनाको महत्व र रजब महिनामा गरिने केही बिद्अत कार्यहरु ?
जकातका मसारिफ (अधिकारवाला)
**“सदका (जकात) त केवल दरिद्रहरु, अभाव ग्रस्तहरु र सद्काको व्यवस्थापनमा नियुक्त व्यक्तिहरुका लागि हो र ती व्यक्तिहरुका लागि जसका ह्रदयहरुलाई जोड्नु अभिष्ट होस् (साथै जकात) दासहरुको मुक्ति, ऋणीहरु (को ऋण भुक्तानी) का लागि, अल्लाहको मार्ग (मा खर्च गर्न) मा र पथिकहरुका निम्ति हो ।” (सूरह अत्–तौबाः ६०)
Read more: जकातका मसारिफ (अधिकारवाला)
**कब्रको जियारत गर्नु (कब्रिस्तानमा जानु) यदि कब्रवालाहरुको लागि क्षमा याचना एवं तौबाको लागि, कब्रहरुलाई हेरेर पाठ सिक्नको लागि र आफूले पनि मर्नु पर्ने र आखिरतमा अल्लाहको अगाडि उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्थालाई सम्झनाको लागि हो भने यसको अनुमति रहेको पाइन्छ । यदि कब्रको जियारत गर्नाले संसारको मोहमा कमि आउँछ र आखिरतमा सँगै जाने सामानहरु बटुल्ने चिन्ता मनमा उत्पन्न हुन्छ भने सम्पूर्ण इमामहरुका अनुसार यसको अनुमति रहेको छ । अल्लाहका रसूल (स.) ले सुरुमा यसबाट मनाही गर्नु भएको थियो तर पछि उहाँ (स.) ले यसको अनुमति दिनुभयो । यस विषयमा केही हदीसहरु प्रमाणित छन् । तर हामी ती हदीसहरु मध्ये केवल दुई हदीसहरुलाई उल्लेख गर्दैछौ ।
Read more: कब्रिस्तान जानु
सबै प्रशंसा संसारको पालनहार अल्लाहको लागि हो । आकाश र पृथ्वीलाई थामने र सृष्टिको नीति नियम बनाउने वाला जसले विभिन्न संदेष्टाहरुलाई आफ्ना भक्तहरुको मार्गदर्शन र नियम सिकाउनका लागि पुरै
प्रमाणको साथ पठायो । सम्पुर्ण सुख सामाग्री माथि उसको प्रशंसा वर्णन गर्दछु र अरु अनुकम्पा र दान श्रेष्ठताको आशा गरि प्रार्थना गर्दछु । म गवाही दिन्छु कि अल्लाह बाहेक कोही वास्तविक उपास्य छैन, उसको कोही
साझेदार छैन, उ एक्लै सबैको मालिक, दया र क्षमा गर्ने वाला हो । र यसको गवाही दिन्छु कि हाम्रो सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहको भक्त,रसूल,उसको प्रिय र मित्र र सृष्टिमा सर्वोत्तम हुन् ।
Read more: इमाम नववीको भूमिका
ईस्लाम को परिचय
इस्लाम (अरबी: الإسلام) एउटा एकेश्वरवादी धर्म हो, जो त्यसका अनुयायी अनुसार, अल्लाहका अन्तिमरसूलरनबी, मुहम्मदसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमद्वारा मनुष्य सम्म पुर्याइएको अन्तिम ईश्वरीय पुस्तक कुरआनको शिक्षामा आधारित छ । अर्थात पृथ्वीको प्रारम्भ देखि इस्लाम यस धर्तीमा रहेको मानिन्छ यस धर्तीमा सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति जसले यहाँ पाइला टेकेका थिए उनीआदमअलैहिस्सलामरहेका थिए उनको धर्म पनि इस्लाम रहेको थियो अर्थात् उनी पनि मुस्लिम नै थिए । तर मुहम्मद सल्लालल्लाहु अलैहि वसल्लम धर्तीका अन्तिम सन्देष्टा मानिन्छन्, उनी पश्चात अब कुनै सन्देष्टा आउनेवाला छैनन् (कुरआन ३३:४०) अब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पश्चात् मुसलमानहरुलाई कुरआनको शिक्षा र उनले (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले) दिएका शिक्षा हदीसको रूपमा आधारित रहेर आफ्नो जीवन व्यतीत गर्न अनिवार्य मानिन्छ । कुरआन अरबी भाषामा अवतरित भएको हो र यसै भाषा मा विश्वको कुल जनसङ्ख्याको २४% भाग्, यानी लगभग १.६ देखी १.८ अरब मानव, द्वारा पढिन्छ र पढाइन्छ । जस मध्ये (स्रोत अनुसार) लगभग २० देखी ३० करोड मानिसको यो मातृभाषा हो ।
Read more: ईस्लाम को परिचय
इमामको रुपमा स्वीकार्य नहुने व्यक्तिहरु
अशान्ति तथा यसको उपचार
सुख शान्ति कसरी प्राप्त हुन्छ
पैगम्बर मुहम्मद (स.अ.व.) को जीवन एक नमूना (4)